Semalt Expert: Importance Of Reporting Scam
Spam dia fiahiana lehibe amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa aterineto. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia misy troba lehibe amin'ny fanampiana ireo mpitsikilo lehibe. Amin'ny toe-javatra hafa dia miatrika tranga maro sy fifandonana maro ny olona mandritra ny hetsika fanafihana tratra.
Nampahatsiahy an'i Ivan Konovalov, Semalt Mpitarika Success Successor, fa zava-dehibe ho an'ny tsirairay ny mitatitra tsy fantatra. Ohatra, afaka miantso ny 0300 123 20400 ianao mba hitatitra ny hosoka na ny trangan-javatra. Ny fanadihadiana ny trangan-javatra dia manampy amin'ny Birao Nasionaly misahana ny Fifindrà-tsonia amin'ny fanadihadiana ary koa fepetra hafa fanitsiana ilaina. Rehefa avy nitatitra tranga iray ianao, dia azonao atao mazava tsara amin'ny dingana manaraka, izay hanaraka ny ahiahinao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ireo tatitra ireo dia mitarika amin'ny fangatahana ireo tranga izay miteraka fanadihadiana. Amin'ny toe-javatra hafa dia mety tsy hitarika fanadihadiana ireo filazana ireo.
Mitatitra ny trangan'ny Royal Mail
Ny ankamaroan'ny tranga dia mitranga amin'ny fanamorana ny hackers. Ny tolotra maimaim-poana an'ny mailaka dia manana sehatra iray izay ahafahan'ny mpampiasa marika ho an'ny spam manokana. Ilaina ny mampiasa endri-tsolika manohitra ny spam, indrindra amin'ny mpamatsy mailaka azo antoka. Ho an'ny mpampiasa mailaka Royal, dia misy olona afaka mandefa spam sy tranga hafa mifandraika amin'ny Freepost Scam Mail, Post Box 797, Exeter EX1 9UN. Ilaina ihany koa ny fanentanana ny mpanjifa. Tadidio fa eo an-tananao ny fiarovana ny tranokalanao sy ny an'ny mpitsidika anao. Foibe mailaka hafa izay ahafahanao mitatitra scam dia ny 0345 611 3413 sy ny scam.mail@royalmail..fr.
Antso an-tariby voalohany
Amin'ny toe-javatra sasany dia azonao atao ny mandefa tranga manokana amin'ny alalan'ny antso an-tariby. Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny manatona ny Sampan-draharahan'ny Fahaleovantena (PSA). Zava-dehibe ny mahafantatra fa ity serivisy ity dia tsy misy maimaim-poana sy fiampangana eo amin'ny mpamatsy anao amin'izao fotoana izao. Afaka mitsidika ny tranokalan'ny PSA ianao mba hitatitra ireo tranga ireo na hiantso ny laharana 0300 303 0020.
Atsaharo ny mailaka scam
Iray amin'ireo fepetra manan-danja tokony horaisina amin'ny fanamarihana spam ny fitaterana izany. Misy faritra marobe izay ahafahanao milaza ny spam. Voalohany indrindra, zava-dehibe ny fanamarihana ny mailaka ho toy ny spam raha vao avy nahazo azy ireo. Io fepetra io dia mandefa hafatra amin'ny mpandefasanao mailaka mba hisakanana ireo hafatra avy amin'ny sehatra na adiresy. Ny dingana iray hafa dia mety hampiditra ny dingana etsy ambony. Ireo mpampiasa ihany koa dia afaka mizara sasantsasany amin'ireny tranga ireny amin'ny alalan'ny fampidirana laharan-tariby mpitandro filaminana izay ahafahanao mivantana mivantana raharaha momba ny spam. Zava-dehibe ihany koa ny fanentanana momba ny sasany amin'ireo fanafihana tratra, izay ahafahana manangana tranonkala ahitàna fahavoazana lehibe.
Zava-dehibe ny mitatitra ny fanaovana hosoka sy ny hetsika hafa amin'ny aterineto tsy ara-dalàna. Olona maro no mijaly be ao amin'ny tranonkala ara-barotra amin'ny alalan'ny spam. Vokatr'izany, ilaina ny mitazona ny tenanao amin'ny fomba ankehitriny sy ny fomba handaminana spam. Amin'ny tranga hafa, azonao atao ny mitatitra mivantana manokana ny manampahefana. Ity fepetra ity dia mety hahatonga ny sasany amin'ireo fomba haingana indrindra hanampy amin'ny fanaraha-maso ny toe-draharahan'ny spam. Ny sasany amin'ireo faritra azonao itaterana spam dia amin'ity torolalana ity. Zava-dehibe izy ireo ary afaka manao fantsona azo antoka amin'ny fanatanterahana asa atao amin'ny aterineto Source .